ပူစီလေးရဲ့တေးသံ(အပျင်းပြေ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » ပူစီလေးရဲ့တေးသံ(အပျင်းပြေ)
- linpin zaw
Posted by linpin zaw on Mar 10, 2012 in Copy/Paste, Music | 8 comments
အလုပ်တွေလုပ်ရလို့ အာရုံညောင်းတဲ့အခါ အပန်းဖြေဖို့ဆိုဒ်ကလေးပါ။ဒီဆိုဒ်ကို ဖွင့်လိုက်ရင် ချစ်စရာ ကြောင်လေးတွေရဲ့ လှုပ်ရှားမှု ပေါ်လာပါမယ်။တပြိုင်တည်းမှာ သီချင်းသံလေးတွေ ပေါ်လာပါမယ်။သီချင်းသံကို ဇိမ်နဲ့နားဆင်၊စည်းချက်ကျကျ လှုပ်ရှားနေတဲ့ ကြောင်လေးတွေကို ကြည့်ပြီး အပန်းပြေစေမှာပါ။သူ့ကို ပျင်းလာတဲ့အခါ Change another cat ကိုရွေးလို့ရတယ်။
ပူစီလေးရဲ့တေးသံကို http://procatinator.com မှာနားဆင် နိုင်ပါတယ်။
About linpin zaw
linpin zaw has written9post in this Website..
View all posts by linpin zaw →
ကိုlinpin zaw ရေ
Posted by linpin zaw on Mar 10, 2012 in 2010/2012 Election, Aha! Jokes, Satire, Arts & Humanities, Aung San/Aung San Suu Kyi, Buddhism, Business & Economics, Celebrity, Christianity, Classifieds, Personal Ad., Community & Society, Complaint / Claim, Computer & Cell Phone, Computers & Technology, Consumer Electronics, Contributor, Columnist, Copy/Paste, Cover Faces, Creative Writing, Critic, Cultures, Drama, Essays.., Editor’s Choice, Editor’s Notes, Education, Entertainment, Environment, Events/Fundraise, Facebook, Food, Drink & Recipes, Gay/Lesbian, Gossip, Rumor, Health & Fitness, History, Hoax, Hobbies & Games, Home & Garden, How To.., Ideas & Plans, Interviews & Profiles, Islam, Jobs & Careers, knowhow, Legal Information/Visa, Letter to The Editor, Literature/Books, Local Guides, Mandalay Gazette, Money & Finance, Movies/TV, Music, My Dear Diary, Myanma News, News, Opinion – Op-ed, Opinions & Discussion, Other – Non Channelized, Parenting & Pregnancy, Photography, Poetry, Politics, Issues, Press Announcements, Relationships & Family, Science & Religion, Sciences & Resources, Short Story, Society & Lifestyle, Software & Links, South East Asia, Sports & Recreation, Steal Deal, Style & Beauty, Think Different, Think Tank, Travel, U.S. News, World News |0comments သူက ပိုရှည်နေမလားလို့ တစ်ခုထဲထည့်လဲရပါတယ်. သူနဲ့ကိုက်ညီရာကိုပေါ့။ အခုဟာက
ဖရဲ သီး နောက်ဆိုရင် မြန်မာလိုရေးပါဟယ် အေမီ နားမလည်ဘူး အဲ့လောက်လည်း မကျွမ်းသေးဘူးလေ
အမလေး အေမီရယ် သူအဲဒါ ပြောထားတာမဟုတ်ဘူး သူလဲ နားမလည်ဘူး ဟိဟိ ဘယ်က ဟာတွေ ကော်ပီကူးထဲ့လဲ မသိဘူးအေ..
ဟိုကြောင်လေးက ဘယ်လိုဆိုပြလဲတော့ မသိဘူး။
ဒီကြောင်လေးကို ကေ တီဗွီ ခေါ်သွားပြီး တကာခံရင် သီချင်းကြီးရော၊သီချင်းလတ်ရော၊ သီချင်းငယ်ရော
တညလုံးဆိုပြမယ်၊ သေချာတယ် အာမခံတယ် ဘယ်လိုလဲ? စမ်းကြည့်မလား ခွစ် ခွစ် ခွစ်
အဲ့ကြောင်က ဆယ့်နှစ်လလုံး ပြာသိုချင်နေတဲ့ ကြောင် ဘဲ ။
ရဲဖမ်းမှာမကြောက်ဘူးလား။ သွတ်သွတ်သွတ် ….။
ကြောင်သီချင်း ဆိုတာ များ အဆန်းလုပ်လို.ဟယ်.. ဒို.ဆီမှာဖြင့် ကြက်တောင်သီချင်းဆိုတယ်.. သိလား..
~~~ ဦးရယ် ဦးရယ် ဦးမလာတဲ့ ရက်ကလေးများဆို သမီးကို ရဲဖမ်းသွားမယ်.. ကျိတ်ငိုရတယ် ချစ်သောဦးရယ် တူနယ် တယ်နယ် ဗြောင်….~~~~~~
အော .. ရွှေတိုက် … ရွှေတိုက် … ဒါကြောင့် အုပ်ထိန်းသူက သူမပါပဲ မန်းလေးမလွှတ်ချင်တာကိုး … ။ သတ်သတ်လွှတ်စားမယ်ပြောပြောပြီး … ကြက်ရိုးသွားသွားကိုက်နေတာတွေ … အုပ်ထိန်းသူဆီ .. လှမ်း သတင်းပို့ဦးမှပဲ .. ငှဲငှဲ …
ပို့စ်ပိုင်ရှင်ရေ … အဲ့ဒီလင့်ကိုတော့ သွားမဖွင့်ရဲသေးဘူး .. ဟိုတစ်ခါလို ဗိုင်းရပ်စ်ကိုက်ခံရမှာ စိုးလို့ …သူများတွေ ဖွင့်ကြည့်ပြီး … နည်းနည်း ကြာမှ … လိုက်ဖွင့်တော့မယ် .. ဟဲဟဲ … ။